MAQAL: Banaan bax maanta ka dhacay magaalada Garoowe+SAWIRO – SBC
MAQAL: Banaan bax maanta ka dhacay magaalada Garoowe+SAWIRO
Dibad bax ujeedkiisu ahaa laba mowduuc ayaa maanta magaalada garoowe Caasimada Puntland isugu soo bexeen dadweyne aad u farabadan iyo masuuliyiinta Gobolka Nugaal iyo kan degmada Garoowe.
Boqolaal qof ayaa socdaal ku maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Garoowe iyagoo wata Boorar ay ku xardhan yihin labada mowduuc ee uu banana baxa ku aadanaa kuwaas oo kala ahaa taageerada shacabka Reer Garowe u hayaan Maamulka Jubaland iyo Cambaareyn loo jeedinayay Dalka South Africa.
Dadka ayaa isugu soo ururay xarunta Barxada ee Garoowe waxaana halkaasi kula hadlay Masuuliyiinta Gobolka Iyo kan degmada, iyagoo ku qeylinaya ereyo dhanka ah dowlada federaalka Soomaaliya iyo Dalka South Africa.
Gudoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa isagu u sheegay dadka dibadbaxa isugu yimid in ay muujiyeen shacuurtooda ku aadan taageerada baaxada leh ee ay u hayaan maamulka Jubaland, taasina ay tahay mid loo baahanyahay inay dhageysato dowlada federaalka Soomaaliya.
Mr Qarjab ayaa sidookale Cambaareyn ka diray Falalkii xumaa ee dhalinyaro Soomaaliyeed loogu geystay Dalka Koonfurta Afrika isagoo ku qeylo dhaamiyay ereyo ay ka mid ahaayeen South Africa ha dhacdo taas oo ay shacabkii Dibadbaxa ku sugnaana ay ka daba jiibinayeen.
Dhageyso Warbixin Faah faahsan oo ay ka diyaarsiday Wariye Samiiro C/raxmaan.RIIX AMA DAAR